မြန်မာ့ ဆေးပညာ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
မြန်မာ့ ဆေးပညာ	# အပူဒဏ် ခံနိုင်စေသောနည်းPublished April 28, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	ရာသီဥတုကတော့ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပူပြင်းလာပါပြီ။ ရန်ကုန် နဲ့ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်း ဒေသတွေကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ မိုးလေးဘာလေး အုံ့တော့ နည်းနည်း ခံသာသေးတယ်။
အညာဒေသတွေ ကတော့ မိုးရိပ်လေရိပ်လည်း မမြင် ၊ ရာသီဥတုကလည်း စင်တီဂရိတ် (၄၃-၄၅)လောက်နီးပါးလောက်ကို တက်နေတော့ “သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ ၊ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူတွေ” တဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့ ကွယ်လွန်နေကြကြောင်း သတင်းကြားရတာ စိတ်မကောင်းစရာဘဲဗျာ။
ရန်ကုန်မှာလည်း ကိုယ့်အိမ်မှာဘဲ နေရင်တော့ သိပ်မသိသာဘူးပေါ့ဗျာ။ အပြင်ကို ကိစ္စရှိလို့ ထွက်မိလိုက်ရင် တက္ကစီ စီးရတာကိုက “ငရဲခံနေရသလား” မှတ်ရတယ်။ မီးပွိုင့်စောင့်နေရလို့ဖြစ်ဖြစ် ၊ Traffic Jam ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ဖြစ် နေပူထဲကြာကြာရပ်နေရလေလေ ၊ အပူဒဏ်ကို သေမတတ်ခံရလေလေဘဲ။
ကိုယ်တောင် ဒီလောက် အပူဒဏ် ခံနေရတာဆိုရင် တစ်နေကုန် ကားမောင်းနေရတဲ့ တက္ကစီသမားတွေရဲ့ ဘ၀ကို စာနာမိတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ၀င်လာတဲ့ ကားတွေမှာ “အဲယားကွန်း” တွေ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တက္ကစီသမားတွေခဗျာ မဖွင့်နိုင်ဘူး ခင်ဗျ။ တက္ကစီတွေက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပေါလာတော့ အခေါက်ရေက နည်းလာတဲ့အထဲ အဲယားကွန်းဖွင့်လိုက်ရင် ဆီပိုစားပြီး နေ့တွက် မကိုက်မှာမို့ ဒီအတိုင်း အပူဒဏ်ကို ကြိတ်မှိတ်ခံပြီး ကားဆွဲနေကြရတဲ့ သူတို့ဘ၀ကို ကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး။
Posted in ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတ, မြန်မာ့ ဆေးပညာ | Tagged ထန်းလျှက်, လဘ္ဘက်ခြောက်, သက်ကြီးရွယ်အိုများ, အပူချိန် မြင့်တက်ခြင်း, အပူဒဏ်, ရေခဲရေ, ရေနွေးကြမ်း, နွေရာသီ |6Comments	# အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း (၁)Published October 5, 2010 | By Thu Tay Thii	.
Posted in မြန်မာ့ ဆေးပညာ | Tagged Healthy Long-life, Myanmar Medicine, အသက်ရှည်ရာ အနာမဲ့ကြောင်း, မြန်မာ့ ဆေးပညာ	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (57,918)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,004)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (46,988)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (31,448)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (23,480)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (14,615)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,637)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,002)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,324)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,279)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,122)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,060)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (9,858)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (9,828)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,306)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,147)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,840)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,514)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,209)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,188)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,830)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (7,723)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,688)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,557)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,273)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,257)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (6,928)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (6,719)# (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် သြဂုတ်လ ဟောကိန်းများ (6,484)# စကား (၆) ခွန်း လူ၌ထွန်း (6,040)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !